लोकगायनमा जमेकी विष्णु माझीको जीवन गुमनाम कसले बनाइरहेछ ?किन एउटै मात्र फोटो प्रयोग भइरहेको छ ? – News Nepali Dainik
लोकगायनमा जमेकी विष्णु माझीको जीवन गुमनाम कसले बनाइरहेछ ?किन एउटै मात्र फोटो प्रयोग भइरहेको छ ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०३, २०७७ समय: १९:०५:४४
देशकै चर्चित गायिका कुनै सञ्चार माध्यममा छाउँदिनन् न त देश/विदेशको कन्सर्टमै देखा पर्छिन् । यो हविगत कसले बनायो ? झण्डै साढे ५ हजार गीतमा स्वर भरिसकेकी र दशकभन्दा बढी समयदेखि लोकगायनमा जमेकी विष्णुको जीवन गुमनाम कसले बनाइरहेछ ? उनको साढे ५ हजारभन्दा बढी गीत भेटिने ठाउँमा किन एउटै मात्र फोटो प्रयोग भइरहेको छ ?
Last Updated on: March 16th, 2021 at 7:05 pm